မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၁၀) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၁၀)
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၁၀)
Posted by aye.kk on Jun 21, 2012 in My Dear Diary | 8 comments
ပြန် မည့် ရက် မ တိုင် ခင် ၊ တ ရက် အ လို ကျ မ နေ ထိုင် ရာ သို ့ဦး ရောက်
လာ ပါ သည် ။
ကောင် လေး ကို ရော တွေ ့ဖို့ ပြော ထား ပြီး ပြီ လား ဟု မေး ပါ သည် ။
ဘယ် နေ ရာ မှာ ဆုံ ဘို့မှာ ထား လည်း ၊ အ ကောင်း ဆုံး က
မြို ထဲ က အ အေး ဆိုင် တစ် နေ ရာ မှာ တွေ့ပြီး စ ကား ပြော ချင် တယ် ဟု ဦး က တောင်း ဆို ပါ သည် ။
သ္မီး က တော့ မ လိုက် ပါ နဲ ့….
ဦး အ နေ နဲ့က ၊ ကောင် လေး အ ခြေ အ နေ ကို ကြည့် ပြီး စ ကား ပြော ချင် တယ် ဟု ပြော ပါ သည် ။ ကောင် လေး က လက် ရှိ ဒီ မှာ မှ မ နေ ကြောင်း ။ ဦး ကို ခေါ် ပြ တွေ့ဘို ့ဆို တာ လော လော ဆယ် မ ဖြစ် နိုင် သေး ပါ ဟု ကျ မ မှ ဦး ကို ပြော ပြ မိ ပါ သည် ။
ဦး က မျက် နှာ လေး တ ချက် လန်း သွား ကာ ကြည် လင် သွား ပါ သည် ။
သ္မီး က ဦး ကို ညာ နေ တာ လား …
အ မှန် တ ကယ် ပြော နေ တာ လား ဆို တာ ဘာ နဲ ့သက် သေ ပြ မှာ လည်း ဟု မေး ပါ သည် ။ အ ဝေး မှာ အ မှန် တ ကယ် နေ တယ် ဆို လည်း ကောင် လေး ရေး ထား တဲ့ ရည်း စား စာ တွေ တော့ သ္မီး ပြ နိုင် ရ မယ် ဟု ပြော ပါ သည် ။ ကျ မ အ တွက် အ ခက် တွေ့စေ သည့် စ ကား မျိုး ဖြစ် နေ ၍ ၊ ကျ မ မှ ဦး ကို ဘာ ပြန် ပြော ရ မယ် မှန်း မ သိ တော့ ပါ။
ဒါ ဆို လည်း ဦး ကို စာ တွေ ယူ လာ ခဲ့ ပြ ပေး ဟု ပြော ပါ သည် ။ ကျ မ မှ လည်း ဦး ပြန် လိုက် ပို ့တဲ့ အ ချိန် ကျ မှ ထည့် ပေး လိုက် တော့ မယ် ဟု ပြော မိ ပါ သည်။
အဲ ဒါ လည်း ကောင်း ပါ တယ်။ စော စော မ သိ ရ တော့ ၊ စော စော စိတ် မ ဆင်း ရဲ ရ တော့ ဘူး ပေါ့ ဟု ဆို ပါ သည် ။
အ မှန် တ ကယ် ဆို ရင်…….
ဒီ စာ တွေ က ဦး မျက် ရည် တွေ လေ ။
ဦး က လည်း လက် ထဲ ကိုင် ပြီး မ သွား ချင် ပါ ဘူး ။
အ တော် စိတ် ဆင်း ရဲ စ ရာ ကောင်း တဲ့ ကိ စ္စ ပဲ ဟု ဦး က ပြော ပါ သည် ။
ဒါ ဆို လည်း သ င်္ဘော ပေါ် ရောက် မှ ပဲ အေး ဆေး ဖတ် ကြည့် တော့ မယ် ၊ ဒီ နေ့က တော့ အ ချိ န် သိတ် မ ရ ဘူး ။ သ င်္ဘော ပြန် ထွက် မယ့် ကိ စ္စ လိုက် လုပ် ရ ဦး မယ် ၊ လိုက် နိုင် ရင် ဦး အ လုပ် လုပ် တဲ့ သ င်္ဘော ဆီ သ္မီး ကို ခ ဏ ခေါ် သွား လယ် မယ် ။ နေ တဲ့ နေ ရာ နဲ့က နီး တော့ ပြန် ရ တာ လည်း အ ဆင် ပြေ တယ် ၊ ဦး နဲ့အ ရမ်း ရင်း နှီး တဲ့ သူ ငယ် ချင်း (သ င်္ဘော သား ) လုပ် ဖော် ကိုင် ဖက် ကို ရီး ယား တွေ နဲ့မိတ် ဆက် ပေး အုန်း မယ် ။ ကြေး အိုး စား ပြီး ရင် သွား ကြ တာ ပေါ့ ဟု ပြော ပါ သည် ။
တ ဆက် တည်း ပင် ၊ သ္မီး ကြိုက် တဲ့ “ကြေး အိုး ဘု ရင်” က ကြေး အိုး သွား ကျွေး မယ် ။ အ ချိန် သိတ် မ ရ ဘူး ။ နေ့ခင်း ဆယ့် တစ် နာ ရီ မှာ ဦး လို အပ် တဲ့ သ င်္ဘော ပြန် ထွက် မယ့် စာ ရွက် စာ တမ်း တွေ လုပ် ရ ဦး မည် ဟု ဆို ခါ ၊ ပြော ပြီး ကြေး အိုး ဆိုင် ဘက် သွား ပြီး ကြေး အိုး မှာ စား ကြ ပါ သည် ။
သ္မီး ငယ် ငယ် က ကြေး အိုး စား ချင် ရင် ဆိုင် မှာ ပါ ဆယ် လာ ထုတ် ပေး ရ တယ် ။
တစ် ခါ ဆိုင် မှာ လာ ခေါ် ကျွေး ဘူး တာ မ စား တတ် တော့ ဖိတ် စဉ် ကုန် တယ် လေ,မှတ် ရော မှတ် မိ သေး ရဲ့လား ဟု ပြော ပါ သည် ။ ပါ ဆယ် ထုတ် ပြီး ယူ သွား ဦး ၊ ည နေ ဆာ ရင် စား လို ့ရ တယ် ဟု ပြော ပါ သည် ။
လက် ထဲ တော့ ကိုင် မ သွား ချင် ပါ ၊ ဦး သ င်္ဘော ဆီ လည်း အ လည် လိုက် ခဲ့ ရ ဦး မယ် ။ လက် ထဲ မှာ တ ကိုင် ကိုင် နဲ့ရှက် တယ် ဟု ပြော မိ ပါ သည် ။ ထို အ ခါ ဦး က ….
ကား မ ယူ လာ သော အ ကြောင်း အ ရင်း ကျ မ အား ရှင်း ပြ ခဲ့ ပါ သည် ။
ဒီ နေ့ကား မ ယူ လာ ခဲ့ တော့ ဘူး ၊ ကား ယူ လာ ရင် လည်း မ ထူး ဘူး ။ အလုပ် ရှုတ် တာ ပဲ အ ဖတ် တင် မှာ ၊ ကား က ယူ လာ ရင် မိ ဘ အိမ် မှာ ပြန် ထား ရ မှာ ။ နောက် ပြီး မ နက် အ စော ကြီး ဦး နေ တဲ့ နေ ရာ ဝင် ဒါ မီ ယာ က နေ ထ လာ ရ မှာ ၊ ဆို တော့ မ ထူး ဘူး ၊ ဒ ရိုင် ဘာ ကို လည်း လိုက် မ ပို့ခိုင်း ချင် တော့ တာ နဲ့လေ ။
( ဒ ရိုင် ဘာ က လည်း ၊ ဘာ ပဲ လုပ် လုပ် အ စ စ အ ရာ ရာ ၊ အိမ် ကို ပြန် ပြီး သ တင်း ပို တတ် တဲ့ သူ ဆို တော့ ခါ ၊အ မြဲ ပဲ စိတ် ညစ် ရ လွန်း လို့ပါ ဟု ဦး က ပြော ပြ ပါ သည် )
ဒီ ည တော့သ င်္ဘော မှာ ပဲ အိပ် တော့ မယ် ဆို ပြီး ပြော ခဲ့ ပြီး ပြီ မို ့လို့အ မေ က တောင် စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် နေ သေး တယ် ။ အ မေ က သူ့ဘာ သာ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် နေ တာ ထက် စာ ရင် ဦး ရဲ ့မျက် နှာ ကို ကြည့် ပြီး စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် တဲ့ အ မူ အ ရာ တွေ့ရင် ထ မင်း တောင် မ စား တော့ ဘူး ၊ ချော့ လည်း မ ရ ဘူး ၊ အ မှန် မ သိ မ ရ ခြင်း မ အိပ် တော့ ဘူး ။
အဲ ဒီ လို မျိုး ဆိုတော့ အမေ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် မှာ ကို ဦး က လည်း လုံး ဝ မ လို လား ဘူး ။ ကြေး အိုး ကို သ္မီး မ ကိုင် ချင် ရင် ဦး လက် က ဆွဲ ပေး သွား မယ်
ဟု ပြော ပြီး ၊ ပြော ပြော ဆို ဆို နှင့် ပင် ကြေး အိုး ပါ ဆယ် တ ထုတ် ထုတ် ခိုင်း လိုက် ပါ သည် ။ ကျ မ အ ပေါ် အ နွံ အ တာ ခံ နိုင် သော ဦး ကို လည်း စိတ် ထဲ မှ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် ပြီး သ နား မိ ပါ သည် ။
မ နက် အ စော ကြီး ထ ရ မှာ မို့မ ထူး တာ နဲ့ကား နဲ ့သော့ ကို အ ပြီး အပ် ခဲ့ ပြီး ထွက် လာ ခဲ့ လိုက် တာ ။ ဒီ နေ့တော့ စိတ် လေ စ ရာ ကိ စ္စ ရင် ဆိုင် ရ မယ် ဆို ရင် ၊ အိမ် ပြန် လည်း ပဲ မ ထူး ဘူး ။ ဦး မျက် နှာ ညိုး နေ ရင် အ မေ က တန်း ပြီး သိ တယ် ၊ လိမ် လို့ မ ရ ဘူး ။ အ မေ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် မှာ လည်း စိုး တယ် ။ကား ကို တစ် ခါ တည်း အပ် ခဲ့ တယ် ။
သ္မီး နေ နေ တဲ့ နေ ရာ က လည်း ၊ ဦး တို့သ င်္ဘော ကျောက် ချ ရပ် နား တဲ့ နေ ရာ နဲ့လည်း အ လှမ်း နီး တယ် ။ ဦး က တစ် ခါ တည်း တွက် ထား ပြီး သား ပဲ ဟု ဆို ခါ ထပ် မံ နား လည် အောင် ပြော ပြ ပါ သည် ။
ကြေး အိုး ဆိုင် က ထွက် အ ပြီး ၊ ဦး တို့အ လုပ် လုပ် သည့် နိုင် ငံ ခြား သ င်္ဘော ပေါ် တက် ကြည့် ချင် သ ဖြင့် အ လွန် ပျော် သွား ပါ သည် ။ ဦး က လည်း ကို ရီး ယား သူ ငယ် ချင်း တွေ ရှေ့ နည်း နည်း လေး မှ မ ရယ် ပြ နဲ့နော် ။ သ္မီး က ရယ် လိုက် လျှင် ပါး လေး ချိုင့် ဝင် ထွက် အောင် ရယ် တတ် တယ် ။ သူ တို ့မျက် စေ့ ထဲ သ ဘော ကျ လို့ယောက် ဖ ခေါ် နေ ဦး မယ် ။ ဦး က မောင် နှ မ တစ် ဝမ်း ကွဲ ဆို ပြီး ပြော ပြ ထား တာ ဟု ဆို ပြီး ကြို တင် ပြော ပြ ထား ပါ သည် ။
သ င်္ဘော ပေါ် ရောက် သည့် အ ခါ ကို ရီး ယား နိုင် ငံ သား သ င်္ဘော သား များ ကို ဦး က ချည် ထည် ပု ဆိုး များ ပေး ဝတ် ထား သ ဖြင့် ၊ ကျ မ က ဗ မာ ဟု ထင် မှတ် သွား မိ ပါ သည် ။ ဦး ပြော တော့ ကို ရီး ယား တွေ့တော့ ဗ မာ ။ ဇ ဝေ ဇ ဝါ ဖြစ် ပြီး ဗ မာ လား ဟု မေး မိ လျှင် ။ ကို ရီး ယား လို ပြန် ပြော ကြ သ ဖြင့် နား မ လည် ခါ ၊ သ ဘော ကျ ပြီး ကျ မ မှ ရယ် မိ ပါ သည် ။
သူ တို့က လည်း ၊ ကျ မ ရယ် လိုက် မိ သည့် အ ချိန် ၊ ဦး ရဲ ့အိတ် ကဒ် ထဲ တွင် ဆောင် ထား သည့် ကောင် မ လေး နှင့် တူ သည် ဟု ( အ င်္ဂ လိပ် ) ဘာ သာ စ ကား ဖြင့် ဝိုင်း ဝန်း ပြော ကြ ပါ တော့ သည် ။ သူ တို့ပြော တာ နား လည် လား ဟု ဝိုင်း မေး ကြ ပါ သည် ။
အ မူ အ ရာ ဖြင့် လည်း ပိုက် ဆံ အိပ် ကဒ် ထဲ ရှိ မြင် ဘူး သည့် ဓါတ် ပုံ နှင့် အလွန် ဆင် သည့် အပြင် အ တူ တူ ဟု ဝိုင်း ပြော ကြ ပြီး တ ယောက် တ လက် လက် တွေ ကမ်း ပေး ခါ ၊ တ ကဲ ကဲ နှုတ် ဆက် ရန် လုပ် နေ ကြ လျှင် ၊ ကျ မ က လည်း လက် ဆွဲ နှုတ် ဆက် မ ခံ ပဲ နေ နေ သ ဖြင့် ၊ ဦး က ကို ရီး ယား နှင့် အ င်္ဂ လိတ် လို ညှပ် ပြီး ။ ဗ မာ မိန်း ခ လေး တွေ က ထို သို့လက် ဆွဲ နှုတ် ဆက် မှု မျိုး မ ပြု လုပ် တတ် ကြောင်း ချွေး ဇော ပြန် အောင် ရှင်း ပြ လိုက် ရ ပါ တော့ သည် ။ ရှက် စိတ် မွန် ထူ ပြီး နီ ရဲ နေ သော ၊ မ နေ တတ် နေ သော ကျ မ အား ဦး က မျက် နှာ ရိပ် ပြ လျှက် အ မြန် ဆွဲ ခေါ် ထုတ် လာ ခဲ့ ပါ သည် ။
ကျ မ အား မ ခေါ် လာ မိ ရင် ကောင်း မှာ ၊ လိုက် လာ မိ တာ နောင် တ ရ နေ ပြီ လား ဟု မေး ပါ သည် ။
ကျ မ က လည်း နိုင် ငံ ခြား သ င်္ဘော ကြီး ပေါ် တတ် ကြည့် ချင် ၍ သာ လိုက် လာ ခဲ့ မိ ပါ သည် ။ နိုင် ငံ ခြား စ လေ့ ဓ ရိုက် ယဉ် ကျေး မှု ဆို လည်း လက် ဆွဲ နှုတ် ဆက် မှာ ကို တော့ ရှက် သည် ဟု ပြော ပြ မိ ပါ သည် ။ ဦး က လည်း ကျ မ ကို ပြန် ပို့ပေး ခဲ့ ပါ သည် ။ ဦး လက် ထဲ တွင် ကိုင် လာ ပေး ခဲ့ သော ကြေး အိုး အား နွေး စား ရန် မှာ ပါ သေး သည် ။
ပြန် ခါ နီး ၌ ကျ မ မှ လည်း ၊ ဒိုင် ယာ ယီ စာ အုပ် အား ယူ ခါ ဦး လက် ထဲ ထည့် ပေး မိ ပါ သည် ။
ဦး က အ ရမ်း အံ့ အား သင့် သွား ပါ သည် ။
ထဲ့ ပေး မည် ထင် တာ က ရည်း စား စာ များ ။
လက် ထဲ ထည့် ပေး လာ သည် က ဒိုင် ယာ ယီ စာ အုပ် ။
ဒိုင် ယာ ယီ ဆို တာ ကိုယ် ရေး ကိုယ် တာ လျို့ဝှက် ချက် ဖြစ် ၍ ဦး က ငြင်း ဆန် ပါ သည် ။ ဒိုင် ယာ ယီ က လုံး ဝ မ ဖတ် သင့် အပ် သော အ ရာ ဖြစ် သည် ဟု ပြော ဆို ပြီး ၊ ကျ မ လက် ထဲ သို ့ဒိုင် ယာ ယီ စာ အုပ် ပြန် ထည့် ပေး ပါ သည် ။ သ္မီး က ဦး ကို ညာ သည် အ မှန် ကို မ ပြော ၊ ဦး စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် ရ သည် ဟု ပြော ခါ ဦး ၏ မျက် နှာ နီ မြန်း လျှက် ရဲ တက် လာ ပါ သည် ။
ကျ မ က လည်း…..
ဦး ဖတ် ရင် သ ဘော ပေါက် သွား မှာ ပါ ။ ညာ လည်း မ ညာ ပါ ၊ ကောင် လေး က လည်း သူ ့အ သက် တ မျှ ဖြစ် တဲ့ ဒိုင် ယာ ယီ ကို ပဲ ပေး အပ် ထား တာ ပါ ဦး ဟု ပြော ပြ မိ ပါ သည် ။ ဖတ် ကြည့် ရင် ဦး သိ ချင် တဲ့ အ ဖြေ ထွက် လာ မှာ ပါ ဟု ပြော ပြ မိ ပါ သည် ။
ဦး က ….
ဒီ လောက် ထူ တဲ့ ဒိုင် ယာ ယီ စာ အုပ် ကို ဦး တွေ့လည်း မ တွေ ့ဖူး ဘူး ။
မြင် လည်း မ မြင် ဖူး ဘူး ဟု ဆို ခါ ၊ ဝထ္ထု စာ အုပ် နဲ့တူ တယ် ဆို ပြီး ပြော ပါ သည်။
ဒီ တ ခေါက် လည်း ၊ သ င်္ဘော က သုံး လ တောင် ကြာ မှာ ၊ သ္မီး ပေး တဲ့ ဝထ္ထု စာ အုပ် နဲ ့တူ တဲ့ ဒိုင် ယာ ယီ ဆို တာ မ နည်း ဖတ် ကြည့် ရ ဦး မယ် ။
ဝထ္ထု ဖတ် ရ တာ ဦး က တ အား ပျင်း တယ် ။
သ္မီး ပေး တဲ့ ဒိုင် ယာ ယီ စာ အုပ် က အ ထူ ကြီး ၊ ဖတ် ကြည့် စေ ချင် ရင် တော့ ဖတ် ကြည့် ပေး ပါ့ မယ် ၊ ဟု ဦး က ပြော ပါ သည်။
ကျ မ က လည်း…..၊ နောက် ဆုံး အ နေ နဲ ့တောင်း ဆို ပါ တယ် ဦး ဟု ပြော ကာ ၊ ဒိုင် ယာ ယီ စာ အုပ် အား ဦး လက် ထဲ သေ သေ ချာ ချာ ထည့် ပေး လိုက် ပါ သည် ။
သ္မီး နောင် တ ရ မ ရ အ သေ အ ချာ စဉ်း စား ဦး နော် ဟု ထပ် မေး ပြန် ပါ သည် ။ ကျ မ မှ လည်း နောင် တ မ ရ ပါ ဟု ပြန် ပြော မိ ပါ သည် ။ သ္မီး အ နေ နဲ ့၊ ဦး ကို ဒီ ဒိုင် ယာ ယီ ပေး တာ က တော့ ၊ န မိတ် မ ကောင်း တဲ့ အ ဓိ ပ္ပါယ် ပဲ လို့ ခံ စား မိ တယ် ။ ဦး ပြော တဲ့ စ ကား က သေ ချာ သ လောက် မှန် နေ ပြီ လား မ သိ ၊ သ္မီး ရဲ့လက် ကို ဖမ်း ဆုတ် ပြီး တင်း တင်း ကိုင် မိ တာ က နောက် ဆုံး ဖြစ် ချင် ၊ ဖြစ် သွား နိုင် မှာ ဆို တာ ဦး ပြော တာ တွေ မှန် နေ ပြီ နဲ့တူ တယ် ဟု ပြော ဆို ပါ သည် ။
ဒိုင် ယာ ယီ ကို ဖတ် ပြီး ရင် ၊ ဒီ တ ခေါက် ဦး ပြန် လာ မှ ပဲ ပေး တော့ မယ် ဟု ကျ မ အား ပြော ဆို ခါ ၊ နှုတ် ဆက် ပြီး ပြန် သွား ခဲ့ ပါ သည် ။
ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါတယ် ဗျို ့။ ကေယားလေးရွှင်ရင်တော့ မအေးဇါတ်လမ်း ကို ဒရမ်မာ တစ်ကားလောက် ထုတ်ချင်မိသား ။
သက်သေ အတင်းပြခိုင်းနေတာ အထက်လူကြီး ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
အဲဒီ သမီးနေရာမှာ ဆူး သာ ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုလျှင် အဲလောက် ညင်သာလိမ့်မယ် မထင်ဘူး။
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ.. ဒီထက်တော့ ပိုပြီး ရှင်းပြစရာ မရှိဘူး။ မယုံဘူးဆိုရင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ သိက္ခာကို စော်ကားတာနဲ့ တူတယ်လို့ တခါတည်း အပြတ်ပြောလိုက်မိမှာ.. သို့သော်လည်း ဒိုင်ယာယီလေး ပေးလိုက်တော့ ဇတ်လမ်းလေး က အကွက် တမျိုးပြောင်းသွားတာပေါ့.. မဟုတ်ရင် ဒုံးတိတိ ကြီးနဲ့ ပြီးသွားမယ် ထင်တယ်။
ဟိုး အရင်တုန်းက ဒိုင်ယာရီရေးတဲ ့အလေ့အထလေးတွေ အရမ်းခေတ်စားတယ်နော်။
ခုခေတ်တော့ ခေတ်ပြောင်းသွားလို့လား မသိဘူး ။ အဲ့လို ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ရုပ်ရှင်တွေထဲ လည်း
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကံအကျိုးပေးတွေက ကွဲပြားလေတော့ ….
တချို့လူတွေရဲ့ ဘဝဟာ မွေးကတည်းက သေသည်ထိ အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့် မများပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ ကုန်ဆုံးသွားတာတွေရှိသလို……
တချို့တလေကျတော့လည်း လက်တွေ့ဘဝဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေထက် ဆန်းကြယ်နေပြန်ပါရော…..